जब पिएसजीद्वारा अपमानित कोमानले बार्यनलाई च्याम्पियन बनाए > फिसटेल न्यूज
एजेन्सी । बार्यन म्युनिखका लागि च्याम्पियन्स लिगको फाईनलमा एक मात्र विजयी गोल गरेका विंगर किङ्स्ले कोमानले आफ्नो खेल करियरको सुरुवात पिएसजी बाटै गरेका थिए । उनले खेलको ५९ औँ मिनेटमा बार्यनका लागि गोल गरे । अन्तमा उनकै एकमात्र गोल बार्यनलाई उपाधी हाँसिल गर्न निर्णायक बन्यो । कोमानले फेब्रुअरी २०१३ मा पिएसजीबाट लिग फुटबलमा डेब्यु गरेका थिए । पीएसजीको एकेडेमीमा ८ बर्षको उमेरदेखि आवद्ध भएका उनले पीएसजीको सिनियर टोलीमा सबैभन्दा कम उमेरमा डेब्यु गर्ने खेलाडी बनेका थिए । कोमानले पीएसजीमा केवल दुई सिजन मात्रै बिताए । सो क्रममा उनले १९ खेलमा कुनै गर्न सकेनन् । र उनी सन् २०१४ मा ईटालियन जाईन्ट युभेन्ट्स पुगे । र २०१५ मा लोनमा बार्यन म्युनिखमा जोडिए । पछि बार्यन म्युनिखले उनलाई स्थायी रुपमा क्लबमा भित्राए । हालसम्म बार्यनका लागि उनले १९ गोल गरेका छन् । लिस्बोनमा बार्यनका लागि हिरो बनेका यीनै कोमानलाई पीएसजीले निशुल्क रुपमा युभेन्ट्स जान दिएका थिए । जबकी पीएसजीले नेयमार र एमबाप्पे साईन गर्न करिब ४ सय मिलियन युरो खर्च गरेको थियो ।
मे ६ हङकङ – राष्ट्रिय भलिबल खेलाडीद्वय मञ्जु गुरुङ र लक्ष्मण राना हङकङमा सम्मानित भएका छन् । पर्वत क्लब हङकङले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनीहरुलाई सम्मान गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष काजिमान गुरुङले अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिमा पर्वत मञ्च हङकङका अध्यक्ष दुर्गा गुरुङ ‘मिलन’, विशेष अतिथिमा एनआएन हङकङका अध्यक्ष टीका गुरुङ, […]
आज राती को बन्ला युरोपको च्याम्पियन ?
अगस्ट २३ एजेन्सी :– प्रतिस्पर्धा कम हुने र एकै टोलीले लगतार वर्चस्व जमाइरहने भएका कारण जर्मनी र फ्रान्सको लिगलाई फार्मर्स लिगको संज्ञा दिइएको थियो । तर, यही राष्ट्रका क्लबले स्पेन, इंग्ल्यान्ड र इटलीको क्लबलाई क्वाटरफाइनलभन्दा अघि बढ्न दिएनन् । जर्मनीको लिग च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र फ्रान्सको लिग च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले प्रतिस्पर्धा हुने अन्य […]
कुन टिम बलियो ? दुई च्याम्पियनको फाईनल यात्राबारे जानौँ ।
एजेन्सी । जर्मनीको लिग च्याम्पियन बायर्न म्युनिख र फ्रान्सको लिग च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले प्रतिस्पर्धा हुने अन्य राष्ट्रको लिगको टोलीलाई पन्छाउदै यो सिजनको युइएफए च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा स्थान बनाएका छन् । यि दुई टोलीबीचको फाइनल आज राति पोर्चुगलको लिस्वनमा नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजे हुनेछ । बायर्न ११औं पटक तथा पीएसजी पहिलोपटक फाइनलमा पुग्न […]